Isamsung ivala ikota yokuqala ye-2019 ngeziphumo ezibi | I-Androidsis
Isamsung iqala unyaka ngokuhla okukhulu kwenzuzo
Ikota yokuqala yonyaka idla ngokuba yeyona imbi kakhulu Uninzi lweempawu kwi-Android. Ukuthengisa kwabo kungaphantsi kwaye iziphumo ngokubanzi azizizo ezilungileyo. Sikwazile ukuyibona kunye nayeukuthengisa okungalunganga okwenziwe nguSony. Kodwa izinto azikhange zilunge ngakumbi kwi-Samsung. Uphawu lwaseKorea luqale unyaka ngeyona ndlela imbi kakhulu.
Ukususela Isamsung iqala ngo-2019 ngeziphumo zekota zokuqala ezibi. Kwaphela iiveki kulunyukisiwe ukuba iziphumo zenkampani bezizakuba mbi. Kule meko, ukuthengisa okungalunganga okuvela kwicandelo le-semiconductor kuye kwanceda koku kwehla. Ke iingeniso zenkampani ziwa ngama-60%.
Kunyaka ophelileyo uluhlu lwee-semiconductors zisebenze njengohlobo lomqamelo wenkampani yaseKorea. Nangona ngeli xesha, umatrasi uthe awusekho, kuba nabo baneziphumo ezibi kweli candelo. Kuba, ngaphandle kwenyani yokuba i-Galaxy S10 inesidingo esiqinileyo kwintengiso, icandelo leefowuni lakwaSamsung nalo liyawa.
Njengoko sele ufundile, icandelo le-smartphone kunye ne-IT liqala unyaka nge ukwehla nge-40% kwinzuzo yakho, xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. Nangona ukwehla kwentengiso kweli candelo kuyinto encinci, njengoko sele kwaziwa ukubulela kumanani inkampani ekwabelwana ngayo. Ingxaki kukuncitshiswa komda wenzuzo ejongene nenkampani yaseKorea.
Ngeli thuba, idatha yokuthengisa yekota yokuqala ye-2019 ibonisa ukuba i-Samsung ifumene intengiso exabisa i-27,2 trillion yaseKorea iphumelele. Oku kwehle kancinci kunyaka ophelileyo, 5% kancinci. Le nto ngokwayo ayisiyonto ikhathazayo, njengoko ingekuko ukuhla okukhulu. Ngumda wenzuzo okhankanywe ngasentla owe kakhulu.
Ukusukela ukuthengisa kweli candelo lee-smartphones kuwa, kodwa hayi kakhulu, yi-5% kuphela. Kodwa inzuzo kweli candelo lenkampani yehle kakhulu. Ziphantsi phantse ngama-40% ukuya kwi-1,5 yezigidi zezigidi.. Le yinyani evelisa inkxalabo kwinkampani, ewe. Nangona i-Galaxy S10 ukuza kuthi ga ngoku ine ulwamkelo olufanelekileyo kwimarike kwaye inkampani inethemba elikhulu kubo.
Enyanisweni, Ibango elilungileyo lokuba le Samsung Galaxy S10 inayo ziindaba ezimnandi kwinkampani, ngokuyinxenye. Kuba iyabanceda ukubuyisa umhlaba, xa kuthelekiswa nekota yangaphambili. Nangona kufuneka ugcine engqondweni ukuba ukuthengiswa kweefowuni ngokubanzi kuyawa, kwayen 2018 bawele kwimarike ngokubanzi. Ukongeza, inkampani ikwafanele ithathele ingqalelo ukuba izenzele iindleko ezithile.
Kwezi nyanga zokuqala zika-2019, uSU-amsung usishiye neefowuni ezimbini ezintsha. Kwelinye icala, i Uluhlu lweefowuni zeGalaxy J, ukwenza indlela yoluhlu lwe-Galaxy A. Usapho olutsha lweefowuni sele luyile, ololo los Galaxy M okwangoku kusungulwa kwimarike yaseIndiya njengeyona njongo iphambili. Ke ngoko, oku kulungelelaniswa kwakhona kwamanqanaba abo yinto ekwabize imali.
Ayisiyongokuhlengahlengisa nje amabakala ngokwawo, kodwa kunye nokuveliswa kweefowuni ezintsha. Iindleko ezongeziweyo zokuphuculwa kwezi modeli, uyilo olutsha kunye amaphulo okuthengisa inkampani eyenzileyo ukukhuthaza ezi modeli. Zonke iindleko zeenkampani ekuye kwanyanzeleka ukuba ziyenze kule kota yokuqala. Nangona kulindeleke ukuba bancitshiswe ngokuhamba kwexesha.
I-Samsung Galaxy A80: Uluhlu oluphakathi kunye nekhamera ejikelezayo
Nangona kunjalo, Isamsung icinga ukuba ikota yesibini yalo nyaka izakuba ngcono. Ngapha koko, inkampani ilindele ukonyuka kwebango kwikota yesibini yonyaka. Zininzi iimodeli abazithathela ingqalelo ezinokuthi zikhulise ukuthengisa kwabo, njengeGPS S10 5G okanye i-Galaxy A80, iimodeli ezintsha kunye nokunikezela ngento entsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Isamsung iqala unyaka ngokuhla okukhulu kwenzuzo
UShit Blitz uthatha phambi kolawulo loothixo basentsomini kwi-RPG yeqhinga
I-Redmi ene-Snapdragon 855 inokuvela ngaphandle kwe-in-screen sensor yeminwe